Su’aashii Madaxweynaha, Jawaabtii Inanta yar Iyo Xiisihii Habeenkii Halganka |
Su’aashii Madaxweynaha, Jawaabtii Inanta yar Iyo Xiisihii Habeenkii Halganka
Ankara(GNN):-Banaan bixii ay dadka Turkigu ku baajiyeen isku daygii ay ciidamadda qaarkood ku doonayeen inay taladda kaga tuuraan Madaxweyne Erdogen ayaa la soo bandhigay waxyaabo xiise leh oo qayb ka ahaa kacdoonkii shacabku ku beeniyay kufsigii siyaasadeed ee ciidamaddu isku dayeen.
Turkiyiinta caabiyay inqilaabka ee shaaracyada u soo baxay waxay isugu jireen da’ kasta, isla markaana waxa dadkaa ka mid ah gabadh aad u da’ yarayd oo muuqaalkeedu soo jiitay dad badan oo ka mid ahaa banaanbaxayaasha. Dadkaa waxa ka mid ahaa Madaxweynaha Recep Dayib Erdogan oo mar uu dhex marayay
marayay Waddooyinka Istanbuul arkay gabadh aad u yar oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay. Siday faafisay warbaahinta Turkigu, Madaxwaynuhu si deg deg ah ayuu u amray in la joojiyo gaadhigii uu saarraa,waqti illaaaladda nabadgelyadiisa sugaysay aanay u ogolayn dhaqdhaqaaqyada qaarkood, ka hor inta xaaladdu kala cadaanayso.
Wuxuu u yeedhay inantii yarayd oo lafteeda ay kala lumen waalidkeed oo ay wada socdeen, haddana la weriyay in aanay cabsiyi hayn. Wuxuu waydiiyay sababta ay dibadda ugu soo baxday ee ay u banaanbaxayso. Meel fogba kamay doonin jawaabta ee waxay degdeg ugu tidhi; “Qaranimadayadii ayaa la soo weeraray.”
Markaa kadib Erdogen wuxuu ka codsaday inay fuusho gaadhigii uu la socday, balse waxay ugu jawaabtay oo ay ku tidhi, “Kuma raaci karo, waayo, hawshii aan u soo baxay weli kama gun
Gaadhin.” Madaxweyne Erdogan wuxuu intaa kadib ku amray qaar illaaladiisa ka mid ah inay weheliyaan inantaa, isla markaana markay dhamaysato waajibkeeda ay iyada iyo qoyskeedaba ugu keenaan madaxtooyadda. Wakaaladda Wararka Turkiga oo xiganaysay Afhayeenka Madaxweynaha ayaa
werisay in Erdogan go’aansaday inuu gabadhaa ku daro liiska dad uu siin
doono billad geesi qaran, kuwaasoo ka mid ah banaanbaxayaashii baajiyay in Turkigu dib ugu noqdo xukun millateri.
Muuqaaladda kale ee xiisaha lahaa waxa ka mid ahaa haweenay da’ ah oo uu hore u kaalmeeyay xilli ay u baahnayd caawimo. Haweenaydani waxay soo qaadatay budh wayn markay maqashay inqilaabka, isla markaana waxay u soo baxday dibadda, si ay uga mid noqoto shacabka awooddooda muujinayay ee baajiyay wixii la doonayay. Waxa la waydiiyay sababta ay u soo qaadatay budhka, waxaanay ku jawaabtay oo ay tidhi; ”Wuu ibarbar joogsaday maalintaan u baahnaa,markaa aniguna waxaan budhkayga soo qaatay maalin uu ii baahanyay.”
Waxa kale oo ka mid ahaa dadka banaanbaxa u soo baxay boqol jir hawlgabka ciidamadda ahaa oo intuu soo lebistay dirayskiisii ka qayb qaatay badbaadintii dimoqraadiyadda dalkiisa, isla markaana hor socday kumanaan dadweyne ah.